माता तिर्थ औँसी
माता तिर्थ औँसी
सन्तोष पौड्याल print
लंके उसै पनि साह्रै ब्यस्त मान्छे। त्यही माथि चुनावको धपरीले उसलाई शौच बस्ने फुर्सद पनि छैन। पार्टीले उसलाई सुरक्षाको जिम्मा दिएको छ। हेर्नुस्! पुलिस त देख्नलाई शो मात्र हो यो देशमा। नागरिकले आफ्नो सुरक्षा मात्र होइन, पार्टीको सुरक्षा पनि गर्नु पर्ने छ।
ऊ सबेरै उठ्यो। ज्यानमा एकसरो कपडा हाल्यो। चुल्ठो मिलायो। र बिजुभाइको घर तिर दगुर्यो। बिजुभाइ जिल्लाको प्रतिष्ठित पार्टीका उमेदवार हुन्। केटाहरु पहिले नै तम्तयार भएर बसेका रहेछन्। लंकेले अघिल्लो साँझ नै जम्मा पारेको भाटा सबैको हातमा थमाइदियो। र सबैलाई सानो झन्डा उन्न लगायो। उसले फुर्तीका साथ निर्देशन दियो- हेर, केटा हो! मुख्य काम भाटाको हो। झन्डा त भाटालाई शो मात्र। अली कती लफडा पर्‍यो कि चार्ज भईहाल्ने।
उसले हतार हतार एक किलो लड्डु, बजारमा राम्रै दाम पर्ने पुष्पगुच्छा र शुभकामना कार्ड गुगलबाट डाउनलोड गर्‍यो। अनी आमाको फोटो सँगै फेसबुकमा अपलोड गर्‍यो। र क्याप्सन लेख्यो- 'ह्याप्पी मदर्स डे डियर मम'।
अपलोड गरेको केही छिन मै अरुको भन्दा बेसी लाइक र कमेन्ट आउन थालेपछी ढिलो अपलोड गरेकोमा उसलाई पछुतो भएन। ऊ मोबाइल हेरेर मख्ख पर्‍यो।
अबेर साँझ ऊ बिजुभाइको घरमा पुग्यो। बिजुभाइले अलिकती सितन र शितल-रसको ब्यवस्था गरे। ऊ भोज- ग्रहण गर्दै भोलिको योजनामा तल्लिन भयो।
लंकेकी आमा चिनिमाया अगेनामा खाना कुरेर बसेकी छन्। उनलाई थकथकी लाग्यो- 'मोबाइल चलाऊन जानेकी हुँदी हुम् त फोन गरेर बोलाउदी हुम्। औँसीको दिनमा नि भोकै हुने भो लंके।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख १३, २०७४ ०५:५९:४१